Wararka Suuqa Caawa: Ernesto Valverde, Lorenzo Insigne, Pedri,Axel Witsel,Thiago Alcantara, Iyo Kalvin Phillips
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa Caawa: Ernesto Valverde, Lorenzo Insigne, Pedri,Axel Witsel,Thiago Alcantara, iyo Kalvin Phillips
November 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Tababarihii hore ee Barca Ernesto Valverde ayaa laga yaabaa inuu Sii hayo xilka Manchester United ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka sida ay warineyso Guardian .
Inter ayaa dooneysa inay soo qaadato xiddiga Napoli Lorenzo Insigne – sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Pedri ayaa Xiiso ka helaya kooxda Bayern Munich – sida laga soo xigtay AS .
Reds ayaa isha ku haysa weeraryahanka Kuuriyada Koonfureed ee Hwang Hee-chan sida laga soo xigtay Football Insider
Axel Witsel ayaa ka mid noqday kuwa iska diiwaan galiyay raadaar koox Newcastle, Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Belgium ayaa sidoo kale xiiso ka helaya Juventus sida uu sheegay Sport1 .
Thiago Alcantara ayaa ku andacoonaya in aanu dheg jalaq u siinin wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya in ay Barcelona diyaar u tahay in uu dib ugu soo laabto Camp Nou iyada oo xiddiga khadka dhexe ee Liverpool uu si buuxda diirada u saaray dhacdooyinka Anfield. Goal
Aston Villa ayaa, diyaar u ah inay iska iibiso Bertrand Traore bisha Janaayo. Steven Gerrard ayaa isha ku hayay shaxdiisa wuxuuna diyaar u yahay inuu dhageysto dalabyada u imaanaya weeraryahankii hore ee Chelsea Goal.
ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds Kalvin Phillips ayaa loo aqoonsaday inuu yahay mid ku haboon” kooxda Antonio Conte ee Tottenham. Thesun
Bayern Munich ayaa qorsheyneysa inay Niklas Sule u soo bandhigto heshiis cusub oo ku aadan kooxda ka dhisan Allianz Arena – sida laga soo xigtay TZ .
Xiddiga reer Romania ihi Stoica ayaa noqday mawduuca ugu xiisaha badan kooxda Arsenal – sida laga soo xigtay The Sun .
Barcelona ayaa laga yaabaa inay diyaar u tahay inay joojiso heshiiska Samuel Umtiti – sida laga soo xigtay SPORT .